သိသမျှ Antivirus တွေရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးေ&#4112 — MYSTERY ZILLION
သိသမျှ Antivirus တွေရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးေ&#4112
February 2009 edited March 2011 in Antivirus & Virus
sevenlamp ရဲ့ Bitdefender free edition ကောင်း မကောင်းကို ပြောပြီးတဲ့ နောက်မှာ..
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ကလိကလိ ဖြစ်နေတာက Avast antivirus အကြောင်း ပြောချင်တာပါ...။
အများစုကavast ကိုကောင်းတယ်..ပေါ့တယ်.. သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်လို့ ညွှန်းကြတာကို တွေ့မိပါတယ်။
ကျွန်တော်လညး် အရင်က Avast ကို မသုံးဖူးပါဘူး..ခုလည်း မသုံးဖူးပါဘူး..။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် Avast ကို အထင် မကြီးတော့ပါဘူး..။ ဘာလို့လဲဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက် Cyber cafe တစ်ခုမှာ သွားသုံးဖြစ်ပါတယ်..။ အဲ့ cyber က computer တိုင်းကို avast တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်..။ desktop ပေါ်မှာတော့ bodycroppingdata ဆိုတဲ့ folder လေးကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်..။ properties ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ Application တဲ့ဗျာ...။ သိလိုက်ပါပြီ ဒါဟာ virus folder မှန်း..။ (ချက်ချင်းကို သိလိုက်တာပါ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုအရင်တုန်းက ကျွန်တော့် spoolzv ဆိုတဲ့ folder နဲ့ ခံပြီး ပြီမို့ပါ..။)
အဲ့ bodycroppingdata ကို တွေ့တွေ့ချင်း ကျွန်တော် avast နဲ့ Scan ဖတ်ခိုင်းပါတယ်..။ သူ့ခိုင်းကာမှ သူက ကြာနေတယ်...။ အရင်ဆုံး သူလုပ်ချင်တာ လုပ်တယ်..နောက်မှ ကျွန်တော်ခိုင်းတာကို လုပ်တယ်..။ တော်တော် မုန်းစရာကောင်းတဲ့ avast ..။
scan လည်း ဖတ်ပြီးရော... ထူးမခြားနားပါပဲ...။ ဘာမှ မရှိပါဘူးတဲ့လေ..။
ကျွန်တော်လည်း ထားတော့ ဆိုပြီး ဆက်သုံးနေလိုက်ပါတယ်...။
သုံးပြီးတော့ server မှာ ပိုက်ဆံရှင်းရပါတယ်..။ ကျွန်တော့် data တွေကိုstick ထဲ ထည့်စရာရှိလို့ server မှာ ထည့်ခိုင်းတော့ avast သုံးထားတာကို မြင်ရပြန်တယ်..။ ဟုတ်နေပြီပေါ့လို့ စိတ်ထဲက တွေးမိလိုက်ပါတယ်..။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကျွန်တော့် stick ထဲကို အဲ့ bodycroppingdata က ၀င်တော်မူနေပြီလေ..။
အဲ့ဒါကို တွေ့တော့ ဆိုင်ရှင်ကို ပြောလိုက်ပါတယ်.. အမတို့ စက်မှာ virus ရှိနေပြီနော်..လို့ သတိပေးစကားလေး ပြောလိုက်တော့... ဟင့်အင်း ကျွန်မတို့ စက်တွေမှာ မရှိပါဘူးလို့ ငြင်းတယ်..။
ကျွန်တော်လည်း စကားနိုင်မလုချင်တော့တာနဲ့ဗျာ.. ဘာမှကို ဆက်မပြောဘဲ ပြုံးနေလိုက်ပါတယ်..။
Data ကူးလို့ ပြီးလည်း ပြီးရော..stick ကို safely remove လုပ်လည်း လုပ်ရော... လုပ်လို့ မရသေးတဲ့ အကြောင်း warning ပေးတာကို အဲ့ဆိုင်ရှင်က အတင်း ဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်ဗျာ..။ ကျွန်တော် တော်တော် ဒေါသထွက်သွားပါတယ်... အဲ့လိုလုပ်လို့ ကျွန်တော့် stick တွေ ပျက်တာများပြီမို့.ပါ..။
အိမ်ရောက်တော့ stick ကို kaspersky နဲ့ စစ်တော့ ကိုယ်တော်ချော bodycroppingdata ကို virus အဖြစ် တွေ့ပါလေရော...။
အဲကတည်းက စပြီး ကျွန်တော် avast ကို အထင်မကြီးတော့တာ...။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း antivirus software ကို မရေးနိုင်တာ အမှန်ပါ..။ ဒါပေမယ့် virus ကို မြင်ပြီး ဘာမှ မထူးခြားပဲ မသတ်နိုင်တာကို အသည်းယားတာပါ..။
ကဲ..ကျွန်တော်ကတော့ Avast antivirus မကောင်းကြောင်း ပြောပြီးပြီ...။
နောက်ထပ်.... ကိုယ်သုံးဖူးတဲ့ Antivirus software တွေ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကို ေ၀ဖန် ပေးကြပါဦးလို့..မေတ္တာရပ်ခံရင်းး..............။
"Virus Infection" မှ ကင်းေ၀းကြပါစေ။
Norton ဆိုလေးကန်နေတာပဲသူတင်ဖို ့dual core လောက်မှ
kasper ကြတော့လည်းတွေသမျှ virus ဆိုတာကြီးပဲ သူချည်းပဲကောင်းတယ်
nod 32 ကြပြန်တော့ offline update က date နဲ ့မထွက်ဘူး
ကိုနတ်ရှင်ကောင်းတဲ့နေရာဆိုပြီး အလကားရတိုင်း AVG သုံးတော့
၁) ဗိုင်းရပ်စ်တော့ မိပါသည်။ အတော်လေး စိတ်ချလက်ချ သုံးနိုင်ပါသေးသည်။ (တကယ် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းအောင် မိတယ်)
၂) ကိုယ်သုံးချင်သော Software များ တင်သောအခါ crack တိုင်းပါနေကျ KeyGen, RegEdit ဒါတွေကို သူက Trojan တွေပါဆိုပြီး အ၀င်မခံပြန် :2:
၃) AVG မတင်ခင်က ရှိထားသော Cracked Software များကို တစ်နေ့တခြား လက်လီစိတ်လာသော update များဖြင့် သတ်ပါသည်။ :14:
၄) သူတွေ့တာတွေကို နည်းနည်းလေးတောင် သတိမပေးပဲ သူ့ဘာသာသူ သတ်ပစ်တာမျိုးပါ။ တေရော :106:
Kespersky က ပိုက်ပိုက်ပေး၀ယ်သုံးတော့မှပဲ သုံးမည်ဟု တွေးပါသည်။ စျေးသက်သာတယ်ဆိုပဲ။:39:
Norton is the worst I think But I still use norton because of simplicity in corporate nestwork antivirus protection but don't find virus comapre with kasper or avg
1. I ka ayin tone ka..Symantec Cooperate Edition ko use tar par..
Blood windows Virus mhar de kaung thwar tar pae..
2. Kasperky kya pyan tot la'..License na'..Amhan akan buy mha aloat loat tal..ja..virus ka..tha ma pyan yaw..
3.ade tot naut sone ..nod32 business edition ko use tal..autorun virus twe ko..USB drives twe tat tar na' kill tar pae...updated famous virus twe ...ko tot..nod32 business edition ka..tha nar tar pot...but..offline update tot asin ma pyae woo..Internet shi tal so yin tot..asin pyae par tal.. :68:
kaungkimpyar123 wrote: »
djhtoon wrote: »
burglish မသုံးပါနဲ့။zawgyi Font မရှိရင် http://www.zawgyi.net/ မှာ download ချပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
djhtoon ခင်ဗျား .... ကျွန်တော်တို့ Admin စေတန်က Post Reply ထဲမှာ Web Text Services ထည့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ.... အဲဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီးရိုက်စေချင်ပါတယ်....
ကျနော်သုံးဖူးတဲ့ထဲက မကောင်းတာကတော့ Zone Alarm ပဲ။ Firewall ကော Total Security ကော နှစ်ခုလုံးသုံးဖူးတယ် သူ့ကို install လုပ်ပြီးရင် Internet connection ပါပြုတ်ပြုတ်ထွက်သွားလို့။ တခြားဘော်ဘော်တွေရော အဲလိုဖြစ်ကြလား
ကျွန်တော်တော့ NOD 32 ပဲသုံးတယ်ဗျာ..connection ချိတ်ထားတဲ့ eset ကိုယူပြီး update တော့လုပ်ရတာပေါ့..စိတ်ချမ်းသာတာတော့အမှန်ပဲဗျို့...:)
avast ကို အစ်ကိုသေသေချာချာ မသုံးဘူးလို ့ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အကိုသွားသုံးတဲ့ဆိုင်က software ကိုupdate မလုပ်လို ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။old model ကြီးဖြစ်နေလို ့နေမှာပေါ့။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကောင်းလွန်းလို ့ခက်နေသဗျ။ တစ်ချို ့Patch လုပ်ထားတဲ့ software တွေကိုတောင် ဖျက်ဖျက်ပစ်လို ့မနည်းတာထားရတယ်ဗျို ့........:D
I use Avira Premium Security Suit ( ကြုံတုန်း ကြေညာ၀င်တာ )
သူ့ဟာသူဖျက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး.. အကုန်လုံးတော့ Scan လုပ်တယ်.. တွေ့ရင်တော့ မေးတယ် .. Deny Access လား.. Delete လား.. Move to Qurentime ကိုလား.. အဲလိုမျိုးပေါ့..
Automatic Update လည်းလုပ်ပေးတယ်..
ကျနော်ကတော့ အဲဒါလေးနဲ့ အခု အဆင်ပြေတယ်..
Kasper တော့သွင်းချင်တယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲဟာက သူ့ဟာသွင်းချင်ရင် တခြားဟာတွေ ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ Avira လေးကိုသနားလို့..
ဟုတ်တယ်ဗျို့.. ကျွန်တော်လည်း Avira Premium Security Suite ကု ိကြျိုက်တယ်.. ရိုးရှင်းတယ်.. ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တယ်..။
လောလောဆယ်တော့ Trial နဲ့ သုံးနေတယ်..။ ရတဲ့ key တွေ က kaspersky လို blacklist ဖြစ်ဖြစ်နေလို့..။ :67:
မောင်ပြုံးရယ်နင်ကတော့ antivirus ကိုများသူရည်းစားကြနေတာပဲ
ဒီခေတ်က နတ် နဲ ့antivirus မလှည့်စားနဲ ့လှည့်စာလို ့ကတော့ခံရတော့မှာပဲ
cါကတော့ ESET ကထုတ်တဲ့ smart security ကိုသုံးပါတယ်
ကျနော့် premium က ၆ လပိုင်းမှ ကုန်မယ်ဗျ.. Rapidshare မှာ ထပ်ရှာရဦးမယ်ပဲ..
မောင်ပြုံးရယ်... နင်အညွှန်းကောင်းလို့ နာသုံးလိုက်တာ ဆိုင်ကစက်မှာ autorun.inf နဲ့ killVBS.vbs ကိုသတ်တာ ဆက်တိုက်ပဲ..။ ဆက်တိုက်ကိုသူက delete မလား မေးနေတော့ စက်တောင်ဆက်သုံးလို့မရတော့ဘူး..။ ဟန်းတောင်သွားလို့ restart ချပြီး ချက်ချင်း uninstall လုပ်လိုက်ရတယ်. တော်ပြီ နာ့ အိမ်ကစက်မှာလို တစ်ခါတည်းမိပြီး အသေသတ်တဲ့ kaspersky ပဲသုံးတော့မယ်...) Apply to All လုပ်လို့တော့မပြောနဲ့နော်..။ apply to all box ကို.. မပေါ်တာ ပြီးရောပဲ..
PyiSwai wrote: »
:68: ကျွန်တော်အရင်တုန်းက Avast professional edition ကိုသုံးတာအကိုရ ဒါပေမယ်.မမိုက်ဘူး Privatecam.exe တုန်းကဆိုရင် ကိုယ်က virus ဖိုင်ကိုရွေးပြီး
scan စစ်ခိုင်းတာတောင် သူက clean တဲ.ဗျာ ကဲ ဘယ်လောက်တင်းဖို.ကောင်းလဲ
ပြီးတော. autorun တွေဆိုရင်လည်းသူကမသတ်နိုင်ပြန်ဘူး ကျွန်တော်ကတော.လုံး၀ကိုမသုံးတော.ဘူးဗျို.:67:
ကျွန်တော်ကတော့Norton 360 All In One ကိုသဘောကျတယ် သုံးရတာလည်းလွယ်တယ် updateလည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ် Safe Web လည်းရှိတော့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ လိုင်စင်နဲ့မို့လို့လားတော့မသိဘူး:)
January 2010 edited January 2010 Administrators
Avast ရဲ့ မကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က Uninstall လုပ်ရင် လုပ်လို့မရပဲဖြစ်တတ်တာ။ save mode ထဲ၀င် ဖိုဒါတစ်ခုလုံးဖျက်ချ .... ပြီးရင် Registry ထဲ၀င်ပြီး လိုက်ဖျက် ... အဲလိုလုပ်မှရတယ်။
ဒီမှာ Avast Free Antivirus Version5အသစ်ထွက်တာရှိတယ်။
amazing post for myanmar technician
thanks you for ur share
How about AVIRA .
I have finished download and get regkey . but i don't know it's cool or not !
there is no post for AVIRA
How about AVIRA ? ? ?
I have finished download and get regkey , and now i don't know it's cool or not
အပေါ်မှာ avira အကြောင်းရေးထားတယ်လေ သေချာပြန်ကြည့်ပါအုန်း။
Symantec Endpoint Protection ကော သုံးဖူးကြလားမသိဘူးနော်...... ကျနော်ကတော့ အခုဒါပဲသုံးနေတာ..... လိုင်စင်လဲမလိုဘူး... Update အတွက် လဲ Live Update နဲ့ဆိုပြီးပြီ..... Virus တော်တော်များများလဲမိတယ်..... အဆင်ကိုပြေလို့.... Spyware တွေလဲ တော်တော်မိတယ်...
လို်ချင်တဲ့သူရှိရင် ပြောလေ.... တင်ပေးလိုက်မယ်.... Version 11 တော့ ကျနော့်ဆီမှာရှိတယ်...
ကြုံလို ့ပြောရဦးမယ်။ အခု ESET smart security သုံးထားတာတော်တော်တိုင်ပတ်ပါတယ်။ ဘာဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ port 80 ကိုသုံးတာဖြစ်လို့apache ကို run လို ့မရတော့ပါဘူး။ winsock ကို restart ချလည်းမထူးပါဘူး။ အဲဒါနဲ့uninstall လုပ်ကြည့်တော့လည်း သူ့remover နဲ ့မှရမယ်တဲ့။ သူ remover ကိုစမ်းကြည့်တော့ safe mode ပေါ်မှာ run ရမှာတဲ့။ အဲဒါနဲ ့ပဲပစ်ထားတာ တလလောက်ရှိတော့မယ်။ :mad::mad::mad:
ကျွန်တော် သုံးတာတော့ kaspersky antivirus ပါ အကောင်တွေကို ရှာတာတော့ မဆိုးပါဘူး.....ဒါပေမယ့် Thread detected ဆိုပြီး မသတ်တာ တော့ တော်တော်များတယ်ဗျ..........လေဖို့ကောင်းတယ်
၁)AVIRA လေးတင်ပီးတော system scan ဖတ်လိုတ်တာငတိက explorer.exe ကိုဖျက်သွားတယ်
၂) တွေသမျှ keygen တွေလဲ၀ါးသွားတယ်။ အဟင့်
အရမ်းကောင်းတဲ့ Topic လေးပါပဲ.. ဗဟုသုတ လည်းရတယ်.. ဘာကိုသုံးရင်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်တယ်.... ဆက်ပါဦး..... ကျေးဇူးပါ...
very good topic lay par,thank par,
June 2013 Registered Users
ႈIf you want NOD32 offline update definition please visit
တော်တော်များများက Avast မကောင်းကြောင်းပြောကြပါတယ်ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းကောင်း
ကျိူးနဲ့ ဆိုးကျိုူးကတော့ရှိကြပါတယ်။ ကျနော်က avast ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကရပ်တည်ပြီးပြောပါမယ်
တစ်ခြားဘာတွေကောင်းတယ် မကောင်းဘူးဆိုတာမပြောပါဘူး၊ကျနော်ကိုယ်တွေ့ Serverx.exe
အကြောင်းပြောပြပါမယ်။သူက exe မှန်သမျှကို has stopped working လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်
သူရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်က install လုပ်မထားတယ့် exe တွေကိုပါ ကိုက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။သူနဲ့တွေရင် Exe မှန်သမျှပြောင်ပြီသာမှတ်။
ပြောရရင် antivirus ဆိုတဲ့ exe ကိုတောင်မှ အလုပ်မလုပ်အောင်တားမြစ်နိင်ပါတယ်။သူ့ကို antivirus တော်တော်များများ
ကလည်းတွေပါတယ်။မသတ်နိုင်ပါဘူး။ဘာလိုလဲဆိုတော့ တွေတွေချင်းမှာပဲ exe က virus အကိုက်ခံနေရပါပြီ။
manual သတ်မလားသတ်ပါ။restart ချပြီးတာနဲ့မူလ အတိုင်းပဲ ပြန်ဖြစ်နေမှာပဲ။လုံး၀ကို အကျိုူးမထူးပါဘူး။
ဒီနေရာ avast ကသာသွားပါပြီ။ windows မတက်ခင် post လုပ်ပါတယ်။ ပြီးမှ boot လုပ်ပါတယ်။ boot-time scan မှာသတ်
နိုင်ပါမှာ မူရင်းဖိုင်တွေက ဆက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ပဲ serverx.exe ကိုသေစေမှာပါ။
January 2015 Registered Users
Avast ကိုတော့ လေးငါးနှစ်လောက် သုံးဖူးပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ စက် အရမ်းလေးလာတာနဲ့ မသုံးဖြစ်တော့ဘူး။ အခုတော့ Microsoft Security Essential နဲ့ Malwarebyes Free ကို သုံးထားတယ်။ Local Virus တော်တော်များများက အင်တာနက်က မကူးဘူး၊ စတစ် တွေက ကူးတာဆိုတော့ Smadav လေးသွင်းထားလိုက်ရင် အိုကေသွားပါပြီ။ Antivirus live boot CD လေးတွေတော့ ဆောင်ထားတယ်။ လိုလိုမယ်မယ်ပေါ့။
MSE သံုးတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားရင် ဘာသုံးသုံး အဆင်မပြေပါဘူး။ အဓိကက user တွေပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါ။ Unix OS တစ်ခုခုပြောင်းသုံးကြပါ :P